Home > Comprehensive District Design > Soomaali > Survey
Qoyasaka Qaaliga ah,
Fahamida qiimaha Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay muhiim u tahay in la abuuro sida ugu wanaagsan ee suurto-galka u ah Fahanka Guudd ee Qorshaha Degmada. Waxaan ku martigalinaynaa qof kasta oo ay ilmo u dhigtaan dugsiyada dadweynaha Minneapolis inay buuxiyaan xogg uruurrintaan diirada saareysa ardayda, iyo Hanaanka diiwaangalinta ardayda. Waqtiga kama danbeynta ah ee la dhameystiraayo xogg uruurrintaan waa bisha Oktoober 7eeda.
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay sidoo kale la shaqeynayaan daneeyeyaasha, oo ay ku jiraan ardayda,macalimiinta, iyo hogaamiyeyaasha dugsiyada si ay u fahmaan sida loo jaheynlahaa hanaanka diiwaangalinta ardayda iyo sida ay ardaydu u codsanayaan dugsiyada. Mashruucu waa hal dariiqo oo aan si qoto dheer ugu fahmeyno nidaamyadeena iyo qaab-dhismeedka dugsiyada, maadaama aan abuurayno Fahanka Guud ee Qorshaha degmada. Macluumaadka laga soo urruriyey mashruucaan waxaa lala wadaagi doonaa Kulanka guddiga waxbarashada ee la qaban doono bisha November 26eeda.
La soco waxaa jiri doona fursado kale oo aad kaga qeyb-gali kartid wada hadalada ku saabsan Fahanka Guudd ee Qorshaha Degmada ee dayrtaan. Jawaac-celinada ballaaran ee Fahanka Guud ee Qorshaha Degmada waxaa la heli doonaa bisha Oktoobar iyo dhammaan sanad dugsiyeedka oo dhan.